YBS စီးတဲ့ သူတွေတော့ ပြဿနာပဲ…. လူနာအမှတ် ( ၃၁၁ ) Q ဝင် နေရာ မှ YBS ၉၀ စီးပြီး အိမ်ခိုး ပြန်ခဲ့ – Zartiman
YBS စီးတဲ့ သူတွေတော့ ပြဿနာပဲ…. လူနာအမှတ် ( ၃၁၁ ) Q ဝင် နေရာ မှ YBS ၉၀ စီးပြီး အိမ်ခိုး ပြန်ခဲ့
လက်ဆေးကြပါအုံး…မလိုအပ်ဘဲ အပြင်မထွက်ကြနဲ့အုံး….နှားခေါင်းစည်း ကြပါ။… လူစုလူဝေးရှောင် ကြပါ။…. ဘာပွဲမှ လူမစည် ကြပါနဲ့ ။ စိုးရိမ်လားဆိုရင် ကိုယ့်ပါ့ကိုယ်တောင် အတော်လေး စိုးရိမ် နေပါပြီ။….အရေးကြီးပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်။….. ကိုဗစ်လူနာ case 311 ဟာ တို က်ကြီး မြို့နယ် ရေတွင်းဖြူကျေးရွာက လို့ သိရပါတယ်။
တိုက်ကြီးမြို့နယ် က ဆိုပေမယ့် ပြည်ပပြန် ကို ရန်ကုန် မှာ Q ထားရင်း တွေ့ခဲ့တာပါ ။ ရန်ကုန်မှာ Q ထားတယ် ဆိုပေမယ့် ရွာကို ခိုးပြန် လာလို့ ရွာ က အုပ်ကြီး တို့ ပြန်ပို့ ပေး ခဲ့ တာပါ ။ရွာကို ခိုးပြန်လာတာ က အဖျောက် ရန်ကုန် ၉၀ YBS နဲ့ ပြန်လာ ခဲ့တာ ။ ရွာမရောက် ခင်လမ်းမှာ ပဲ ရာအိမ်မှူးဆီ သတင်းရောက်ပြီး အဆင့်ဆင့်ဆော င်ရွက်ခဲ့လို့ ရန်ကုန် Q ကို လိုက်ပို့ခဲ့တာ ။
လိုက်ပို့တဲ့ အုပ်ကြီးရယ် ရာအိမ်မှူးရယ် စာရေးရယ် ကားသမားရယ်ကိုတော့ Q ဝင်နေရပါပြီ ။ အဖြေကောင်းပါစေပဲ ဆုတောင်း နေရမှာ အသေအချာပါပဲ ။ သူပြန်လာတဲ့နေ့က YBS 90 ကား နဲ့ထိစပ် နေသူတွေ ၂၆ ၊၆ ၊ ၂၀၂၀ ကနေ ၄၊၇ ၊ ၂၀၂၀ ဆိုရင် ကြားထဲ ရက်တွေ ထိ စပ်မှူ့တော့ အတော်များ ပါတယ် ။ လွတ်တဲ့သူတောင် သိပ်မရှိတော့ ပါဘူး ။
အဲသည့် လူတွေအားလုံး ပုံမှန် ကူးလူဆက်ဆံထားတဲ့ အနေအထားက တော်တော်များ ပါတယ် ။ မပြေးသော်လည်း ကန်ရာရှိ ဆိုသလို အ နေကြပ် ကုန်ကြပါပြီ ။ ခုချိန်မှာ အပြစ်လည်း တင်မနေချင်တော့ ပါဘူး ။
YBS စီးတဲ့ သူတှတေော့ ပွဿနာပဲ…. လူနာအမှတျ ( ၃၁၁ ) Q ဝငျ နရော မှ YBS ၉၀ စီးပွီး အိမျခိုး ပွနျခဲ့
လကျဆေးကွပါအုံး…မလိုအပျဘဲ အပွငျမထှကျကွနဲ့အုံး….နှားခေါငျးစညျး ကွပါ။… လူစုလူဝေးရှောငျ ကွပါ။…. ဘာပှဲမှ လူမစညျ ကွပါနဲ့ ။ စိုးရိမျလားဆိုရငျ ကိုယျ့ပါ့ကိုယျတောငျ အတျောလေး စိုးရိမျ နပေါပွီ။….အရေးကွီးပွီလို့ပွောခငျြပါတယျ။….. ကိုဗဈလူနာ case 311 ဟာ တို ကျကွီး မွို့နယျ ရတှေငျးဖွူကြေးရှာက လို့ သိရပါတယျ။
တိုကျကွီးမွို့နယျ က ဆိုပမေယျ့ ပွညျပပွနျ ကို ရနျကုနျ မှာ Q ထားရငျး တှခေဲ့တာပါ ။ ရနျကုနျမှာ Q ထားတယျ ဆိုပမေယျ့ ရှာကို ခိုးပွနျ လာလို့ ရှာ က အုပျကွီး တို့ ပွနျပို့ ပေး ခဲ့ တာပါ ။ရှာကို ခိုးပွနျလာတာ က အဖြောကျ ရနျကုနျ ၉၀ YBS နဲ့ ပွနျလာ ခဲ့တာ ။ ရှာမရောကျ ခငျလမျးမှာ ပဲ ရာအိမျမှူးဆီ သတငျးရောကျပွီး အဆငျ့ဆငျ့ဆော ငျရှကျခဲ့လို့ ရနျကုနျ Q ကို လိုကျပို့ခဲ့တာ ။
လိုကျပို့တဲ့ အုပျကွီးရယျ ရာအိမျမှူးရယျ စာရေးရယျ ကားသမားရယျကိုတော့ Q ဝငျနရေပါပွီ ။ အဖွကေောငျးပါစပေဲ ဆုတောငျး နရေမှာ အသအေခြာပါပဲ ။ သူပွနျလာတဲ့နကေ့ YBS 90 ကား နဲ့ထိစပျ နသေူတှေ ၂၆ ၊၆ ၊ ၂၀၂၀ ကနေ ၄၊၇ ၊ ၂၀၂၀ ဆိုရငျ ကွားထဲ ရကျတှေ ထိ စပျမှူ့တော့ အတျောမြား ပါတယျ ။ လှတျတဲ့သူတောငျ သိပျမရှိတော့ ပါဘူး ။
အဲသညျ့ လူတှအေားလုံး ပုံမှနျ ကူးလူဆကျဆံထားတဲ့ အနအေထားက တျောတျောမြား ပါတယျ ။ မပွေးသျောလညျး ကနျရာရှိ ဆိုသလို အ နကွေပျ ကုနျကွပါပွီ ။ ခုခြိနျမှာ အပွဈလညျး တငျမနခေငျြတော့ ပါဘူး ။
မြန်မာပြည်တစ်ဝန်း မြစ်ရေတွေ စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက် မြင့်တက်လာလို့ သတင်းတွေမပြတ် နားထောင်ကြရန် မိုး/ဇလသတိပေး